I-Boutique - I-Airbnb
UNelly ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uNelly iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex zale mihla embindini wedolophu ezilungisiweyo, ezinefenitshala entsha, ezinezixhobo zombane: iiTV eziphucukileyo, izinto zasekhitshini, i-Wi-Fi. Ilineni emhlophe yekhephu, izinto zokuhombisa.
Iiflethi zenziwe ngumyili, igumbi lokuhlala elihle elivulekileyo, ibhalkhoni yaseFransi, ikhitshi lale mihla elinento yonke oyifunayo, izinto ezintle, igumbi lokulala elingaqhelekanga elinebhedi ebanzi, ilinen emhlophe yekhephu, i-chandelier yeglasi, iikhethini ezirawundi - zenzelwe ukuba uhlale kamnandi . Igumbi lokuhlambela elingaqhelekanga elinezipili liza kukuvuyisa.
4.46 · Izimvo eziyi-28
Ifowuni , i-sms, i-imeyile